I-AQ ekhuselekileyo ye-Angel-Blood Glucose Monitoring Series-Sinocare
Ingelosi ekhuselekileyo ye-AQ
Inkqubo yokujonga inkqubo ye-FAD-GDH kunye nokuchasana okunamandla
Ngokuchanekileyo & Professional & Battery Power Isilumkiso
Inkqubo yokubeka iliso kwi-AQ ekhuselekileyo yeNgelosi yeGlucose yenzelwe ukuba ibe lula, isebenziseka lula, isebenze ngokufanelekileyo kwaye ifuna kuphela umthamo omncinci wesampulu yegazi. Imijikelezo yoVavanyo lweNgelosi ekhuselekileyo ayifuni khowudi egcina ixesha kunye nokuthintela impazamo yomntu ngenxa yokusebenza gwenxa. Imowudi yememori ikuvumela ukuba ugcine ukuya kuthi ga kwiziphumo zovavanyo lweglucose yegazi ukuya kwi-200 kunye ne-10 yeglucose yokulawula isisombululo.
Iimpawu (eziluncedo zobuchwephesha)
1) Iziphumo ezininzi ezinokuthenjwa
2) Ngaphantsi kwevolumu yegazi efunekayo kuphela i-0.6μL
3) Inkqubo yokusebenza esebenziseka lula: ixesha le-5 elikhawulezayo lovavanyo kunye nokungaphazamiseki
Inkqubo yokujonga eswekile yegazi ekhuselekileyo ye-AQ iyahambelana neemfuno ze-ISO 15197: 2013 (In vitro diagnostic test systems- Iimfuno zenkqubo yokujonga iswekile yegazi yokuzivavanya ekulawuleni isifo seswekile).
Igazi elipheleleyo leCapillary Igazi elipheleleyo
Ukugcinwa kweMitha / imeko yoThutho
103 × 57 × 22(Imm) U
1.8oz (52g) ngaphandle kweBatterie
I-3VDC, 2 iAAA iibhetri zeAlkaline
Umlinganiso weGlucose yegazi engama-200 Iziphumo kunye noMhla kunye nexesha lokuLawulwa kwe10
Iziphumo zoMlinganiso weSisombululo ngoMhla kunye nexesha
mg / dL okanye mmol / L
20 ~ 600 mg / dL okanye i-1.1~33.3mmol / L
Iminyaka eli-10 (eqikelelwa kuvavanyo amaxesha asixhenxe ngemini) U. Ngexesha lokusetyenziswa, umsebenzisi kufuneka agcine imveliso ejonge kwiimfuno zemanyuwali yomsebenzisi.
Uvavanyo lwentsebenzo yomsebenzisi:
Uphononongo oluvavanya amaxabiso eglucose ukusuka kwiisampulu zegazi zesandla somnwe ezifunyenwe ngabantu abayi-100 zabonisa ezi ziphumo zilandelayo:
I-100% ngaphakathi kwe- ± 0,83 mmol / L (± 15 mg / dL) yamaxabiso e-YSI kwizinga le-glucose elingaphantsi kwe-5,55 mmol / l (100 mg / dL), kunye ne-100% ngaphakathi kwe- ± 15% yexabiso le-YSI Ukugxilwa kweswekile okanye ngaphezulu kwe-5,55 mmol / L (100 mg / dL).